Fanavaozana ny FSX Ho an'ny Avro Vigilant 730. Ny Avro 730 dia fiaramanidina mpanara-maso Mach 3 ary mpandefa baomba stratejika ho an'ny Royal Air Force. Raha nanomboka niasa izy io, dia tokony hosoloin'ilay fiaramanidina ireo baomba V ho rafitra fanaterana fitaovam-piadiana niokleary voalohany ho an'ny fisakanana nokleary any Angletera. Nofoanana izy io tamin'ny 1957 niaraka tamin'ny fivoarana hafa tamin'ny fiaramanidina mpiadidy ho anisan'ny White White Defense 1957. Ity fonosana ity dia fanavaozana ny fanafainganana FSX ho an'ny Avro Vigilant 730, noforonin'i Kazunori Ito tamin'ny voalohany. Izy io dia manasongadina ny firafitra default an'i Ito ary koa ny telo tena tsara avy amina mpamorona tsy fantatra. Izy io dia manitsy ny olana sasany amin'ny fanavaozana ny FSX teo aloha nanomboka tamin'ny 2011 (izay nahitana ireo firafitra vaovao telo) toy ny teboka fifandraisana diso sy ny fatra tsy mifanaraka mifanentana amin'ny FSX ary misy fanatsarana kely ho an'ny tontonana VC sy 2D. Ny krédit dia mankany Kazunori Ito ho an'ny maodely mahatalanjona tany am-boalohany sy ho an'ny mpamorona endrika tsy misy anarana. Ireo fanavaozana rehetra nataon'i Michael Pook.
Noforonina Alakamisy, 25 Febroary 2021 03: 22
Anaran'ny fisie fsx_avro_vigilant.zip